Izindatshana zikaPini Yakuel zivuliwe Martech Zone »
Imibhalo nge UPini Yakuel
Pini Yakuel, umsunguli kanye ne-CEO ye I-Optimove, ibhizinisi elinenzuzo futhi elikhula ngokushesha, linolwazi olungaphezulu kweminyaka eyishumi ekukhangisweni kwamakhasimende okuqhutshwa ngezibalo, ukubonisana ngebhizinisi nokuthengisa. Uthando lwakhe lokuqonda ukuthi yini eqhuba isimilo samakhasimende lumholele ekutheni ahole phambili ekuthuthukiseni i-Optimove, ifu elihamba phambili kwezentengiselwano lamakhasimende embonini, enika amandla abathengisi ukukhulisa inani lamakhasimende abo. I-Optimove isetshenziswa ngamabhizinisi ayi-180 +, kufaka phakathi iZynga, i-Caesars Interactive, i-Lucky Vitamin, ne-Outbrain.
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Abantu abanobuhlakani obuphezulu bezemizwa (EQ) bayathandwa, babonisa ukusebenza okuqinile futhi ngokuvamile baphumelela kakhulu. Bayagcizelela futhi banamakhono amahle okuxhumana nabantu: bakhombisa ukuqaphela imizwa yabanye futhi babonakalise lokhu kwazi ngamazwi nangezenzo zabo. Bangathola indawo abavumelana ngayo nabantu abahlukahlukene futhi bakhulise ubudlelwano obedlula ubungane nje kanye nokukwazi ukuzwana. Bafeza lokhu ngokunaka nokuhlaziya